3 Magaalooyinka Yurub Best booqday By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 3 Magaalooyinka Yurub Best booqday By tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 28/08/2020)
Waxaa jira dad badan oo magaalo qurux badan in Europe, iyo waxa ka badan, waxaa sidaas u fudud in ay iyaga oo dhan soo booqo. Ku safrid tareen waa hab fiican si aad u aragto kuwaas oo baaldi liiska meelaha. halkan waxaa ku qoran 3 magaalooyinka Yurub ugu fiican booqday tareen.
Waxa aan bilaabi our magaalooyinka Yurub ugu fiican booqday tareen dhaxalkii: used, Belgium
Waxaa dheeraad ah ayaa si Belgium ka badan shukulaatada kaliya. Bruges caan ku tahay inay magaalo kanaalka a, sida Venice iyo Amsterdam. Dhab ahaan, magaalada oo dhan waa site UNESCO Heritage World. Booqashada Bruges tareen waa fikrad aad u fiican tan iyo markii uu Bruges saldhigga ugu weyn ee tareenka waa uun a 10 daqiiqo ka waaweyn oo dhan ku socotaan jidadka shopping iyo 20 daqiiqo in square suuqa. Waxa kale oo ay bixisaa tareenada u wada gashaan magaalooyinka kale ee waaweyn ee Belgium, iyo sidoo kale in ay yar, France, iyo Tareenka Thalys Paris–Brussels-Ostend.
Sidaas jartaan tikidhka tareenka aad oo wuxuu ku raaxaysan goobaha qurux badan oo ah used. U hubso in aad ku raaxaysan Mayo shiilan iyo kuwa maxalliga ah biirka.
Waayo, qorax ah: Seville, Spain
Sidee dareenkaagu ku saabsan qorax iyo Yurub magaalooyinka ugu fiican booqday tareen? Maxaa ku saabsan Andalucian qurux badan Bbc iyo Moorish naqshadaha? Sanqadhaha ka wanaagsan? Markaas Seville waxaa loogu talagalay adiga.
safra ka fiirsaneysa inay u Most safar tareen si ay Spain fekero Barcelona ama Madrid, laakiin jawharad dhabta ah been koonfurta dheeraad ah, magaalada afaraad ee ugu weyn Spain ee.
saldhigga tareen Seville ee Santa Justa waa qayb ka mid ah a Xawaare sare, Adeegga rakaabka shan-line oo xiriiriya 17 magaalooyinka waaweyn ee Spain, sidaas darteed ma jirto hab fiican inay u safraan badan tareen.
Marka aad booqato, hubi in aad soo booqato cathedral neefta-qaadashada iyo tegi on safar Tapas a – aad awoodid buug la koox abaabulan.
magaalooyinka Yurub ugu fiican booqday tareen Waayo, meelaha ka: Munich, Germany
Munich waa isku darka ah oo qurux badan oo ah dalka durkiya cusub sida xarunta BMW iyo Allianz Arena iyo goobaha taariikhiga ah sida Nymphenburg ah Palace iyo Munich Hofgarten waana taas sababta aan u dhignay magaalooyinkeenna Yurub ee ugu wanaagsan ee tareenku ku soo booqdo.
Marka booqanaya Germany tareen, aad bood karaa in Venice, safraan Verona, Trento, iyo Innsbruck, iyo – saacadood oo kaliya ka dib toddoba – ahaan in Munich. views The weheliyaan tareenka waa breathtaking. Tuulooyin qurux badan oo Talyaani ah dariiqa loo maro Alps markaas ayaa Dolomites ka hor yimaada Munich.
Marka aad booqato, hubi in ay isku dayaan qaar ka mid ah ‘Munchner Weiswurst', bolse adeegay pretzels oo immika la dubay iyo iniin khardal macaan. waxaa dhaq hoos ula mid ka mid ah qamri Bavarian ka socdeen.
Sida loo tago magaalooyinka yurub ee ugu fiican ee tareenku ku soo booqdo?
Ma waxaad u waxyoonay inaad soo booqato mid ka mid ah magaalooyinka qurux badan Yurub? magaalooyinka Yurub ugu fiican booqday tareen waxaa la dalban karaa at ugu wanaagsan ee qiimaha tigidhada tareenka ee Saveatrain.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F3-european-cities-best-visited-by-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
tareen safarka safarka travelbelgium travelfrance travelspain